[Topnews:-]Dhalinyaradda Habargidir iyo Murusade oo sheegay ineysan ka qeybgaleeyn daawashada Ciyaaraha ka furmay Muqdisho ?
Friday July 15, 2016 - 20:29:18 in Articles by Super Admin
Waagacusub.net - xiisadii ugu xooganeed ayaa Muqdisho ka aloosan kadib markii dhalinyaradda beelaha Habargidir,Duduble ,Murusade, Xawaadle, Udeejeen ,Reer Banaadiri iyo Jareerweyne shaaciyeen ineysan ka qeybgaleeyn daawashadda ciyaaraha ka furmay Muq
Waagacusub.net - xiisadii ugu xooganeed ayaa Muqdisho ka aloosan kadib markii dhalinyaradda beelaha Habargidir,Duduble ,Murusade, Xawaadle, Udeejeen ,Reer Banaadiri iyo Jareerweyne shaaciyeen ineysan ka qeybgaleeyn daawashadda ciyaaraha ka furmay Muqdisho ee loogu magacdaray isdhexgalka shacabka goboladda Somalia. Dhalinyaradda ayaa sheegay in ujeedku ciyaarta tahay mashruuc qabyaaladeeysan oo lacag aruurin loogu sameeynaa Xasan Garguurte iyo Xaaskiisa sidaas darteedna aysan hal dollar ku bixin doonin daawashadda ciyaara nuucaasa.
"Ciyaartooydii goboladda Somalia waxaa la dejiyay seddex Hotel oo ganacsato Abgaala leeyihiin,waxaana la dhahay Garoonka halagu galo shan dollar iyo laba dollar,lacagtana waxaa la siinayaa maamulka gobolka Banaadir oo ay shirkad la tahay xaaska Madaxweynaha" ayuu yiri Gudoomiyaha dhalinyaradda beesha Habargidir ee gobolka Banaadir Yoonis Cabdinur oo Waagacusub la hadlay.
Gudoomiyaha dhalinyaradda beesha Murusade Cabdirisaq Yusuf ayaa isagana ciyaartaas ku tilmaamay ciyaar qabyaaladeeysan oo shaqsiyaad u dhashay beesha Abgaal lagu naasnuujiyay.
"Dhalinyaradda beesha Murusade wuxuu go-aankoodu yahay inaan daawashadda ciyaartaas laga qeybgalin,waxaan leenahay ciddii qabiilkooda lagu naas nuujiyay ha daawadeen" ayuu yiri Gudoomiye Cabdirisaq Yusuf.
Qaar ka mida horjoogayaasha dhalinyaradda Udeejeen,Xawaadle,Duduble,Banaadiri iyo Jareer weyne ayaa iyagana xaalad amaan darteed codsaday inaan magacooda la xusin laakiin waxeey sheegeen ineysan u daawasho tegi doonin maadama ay tahay mid lacag aruurin loogu sameeynaa Xasan Garguurte.
Qaramadda Midoobay ayaa lacag badan ku bixisay ciyaarta nuucaana iyadoo odayaasha gobolka Hiiraan sheegeen in Caruurtoodii lagu xaday diyaarad UN-ka leeyahay sidaas darteedna ay qaadi doonaan masuuliyadda haddii wax la gaarsiiyo carurutooda.
[DHAGEYSO:]Sheekh Xasan Daahir Aweys oo sheegay in uusan weligiis Noqon Al-Shabaab iyo Sababta loo Xukumi la'yahay?